खानका लागि बाँच्ने कि बाँच्नका लागि खाने ? – Health Post Nepal
२०७५ असोज २३ गते १०:१८
गोरखपुरबाट दिल्ली हुँदै पहिलोपटक पटियाला पुग्दा बिहानको ३ बजिसकेको थियो । तर, रात जति नै छिप्पिसकेको भए तापनि हामीलाई भने पूरा निस्फिक्री थियो । पहिलो त पन्जाबका व्यस्त रात्रिकालीन सडकहरू र त्यहाँ चौबिसै घण्टा चल्ने सार्वजनिक यातायात छँदै थिए । दोस्रोचाहिँ हामी पन्जाबी साथीकै साथ लागेर उसको देश घुम्न गएका थियौँ । त्यसैले छिप्पिसकेको रातले मनमा कुनै त्रास पैदा गर्न सकेको थिएन ।
सामान्यतः तपाईंको घरमा बिहानको ३ बजे कोही पाहुना आइपुगे के गर्नुहुन्छ ? सुत्नका लागि ओढ्ने–ओछ्याउने व्यवस्था गरिदिने, अनि थप सत्कारका लागि बिहानीको प्रतीक्षा गर्ने ।
तर, पटियालाले भने हामीलाई बिहानको ३ बजे नै चौरासीव्यञ्जनले भव्य स्वागत गर्यो । यहाँ चौरासीव्यञ्जनलाई विम्बका रूपमा प्रयोग गरिएको होइन, झन्डै–झन्डै गनेरै ८४ थरीका परिकार हाम्रा लागि तयार पारिएका थिए । म त आफ्नो जीवनकालमा पहिलोपटक त्यति झिसमिसेमा पेट चर्कने गरी खाँदै थिएँ ।
बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । हो, त्यस बिहानीले पनि हाम्रो पन्जाब बसाइ र त्यसदौरान हाम्रा खान्कीबारे स्पष्ट संकेत गर्दै थियो ।
२०औँ शताब्दीकी प्रसिद्ध लेखिका भर्जिनिया वुल्फ भन्छिन्– यदि तपाईंले राम्रोसँग खानुभएको छैन भने तपाईं राम्रोसँग सोच्न सक्नुहुन्न, राम्रोसँग सुत्न सक्नुहुन्न, न त राम्रोसँग प्रेम नै गर्न सक्नुहुनेछ । राजा अकबरले आफ्नो दरबारमा मिष्ठान्न भोजनका लागि मात्र ४ सयभन्दा बढी मानिस नियुक्त गरेका थिए रे । बेलायती प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल सबेरै पेट चर्कने गरी नखाएसम्म केही काम गर्दैनथे ।
‘पाजी, आज हम घर नही जायंगे, ठीक हे ?’
‘पर क्यूँ भाई, घर क्यूँ नही जायंगे ?’
‘क्यूँ की, घर वाले ख्वा ख्वा कर मुजे मार डालेंगे,’ उसले निकै नै हतास भएर भन्यो । गुनासो एकजनाले पोख्यो तर भावनाचाहिँ पूरै टोलीकै त्यही थियो ।
पन्जाबीहरू पनि खानका अत्यन्त सौखिन, अरू कुरा जे होस्, खानेकुरामा कहिल्यै कम्प्रोमाइज नगर्ने । दिनको सुरुवात पन्जाबी लस्सी, ‘गोबीका पराठा’, परौठामा दल्नैपर्ने शुद्द देशी मख्खन, थरीथरीका अचार, अण्डाका परिकार, खुवा, पन्जिरी (जौको पिठोबाट बनेको पन्जाबी परिकार), चिया आदिले हुन्थ्यो । त्यो पनि एक–दईवटा परौठा र एक–दुई गिलास लस्सी खाएर उम्कन नपाइने, अनिवार्य थपीथपी खानैपर्ने ।
बेलुकी मख्खी (मकैको) रोटी, सर्सोका साग, चावल, दाल, चिकेन सुप, अनि सबै परिकारमा मिसाउनका लागि छुट्टै मख्खन । त्यति खाइसकेपछि उठ्नेवेला गुलाब–जामुन अनि फेरि चुठ्नेवेला पन्जाबी सुप ।
दिउँसो खालीमुख बसेको देख्नै नहुने, मानौँ मुख चल्न रोकियो भने संसार पनि चल्न रोकिनेछ । समोसा, पकौडा, चाप (एक प्रकारको भेज सेकुवा), आलुका परिकार, भुजिया आदिले दिनमा संसारलाई चलायमान राख्दथ्यो ।
दिउँसो प्रायः हामी पटियालाका सहर–बजार अनि पुरातात्विक ठाउँहरू घुम्न निस्किन्थ्यौँ । एकदिन त एकजना साथीले असह्य भएर प्रस्ताव राख्यो–
टाउकोमा पगरी नलगाएका नौला मानिस, अनि त्यसमाथि विदेशी पाहुना भनेर हामीले त्यहाँ राम्रै सत्कार पाएका थियौँ । तर पनि बिहान–बेलुकी यसो घुम्न निस्कँदा हामी भने सकेसम्म पाजीको आफन्त वा साथीको घरमा छिर्न खोज्दैनथ्यौँ । जहाँ छिर्यो, पेट चर्कने गरी खानैपर्ने ।
केही दिनअघि मात्रै राजदीपको घरमा घाँटीसम्म आउने गरी समोसा, लालमोहन अनि गाँजरको हलुवा खानुपरेको हामी कसैले बिर्सिएका थिएनौँ । दोस्रोबाट तेस्रो लालमोहन प्लेटमा थपिँदा त सातैजनाको हात आत्मसमर्पण गर्ने शैलीमा ठडिएको थियो ।
हाम्रो बसाइकै दौरान नयाँ वर्ष आयो, जसको रौनकले सिंगो पन्जाब झुमेको थियो । चोक–चोकमा नाँच्ने–गाउनेहरूको ठूलो भिड जम्मा भएको थियो अनि बजारका सयौँ स्टलहरूमा हजारौँ परिकारका खानेकुरा उपलब्ध थिए । घरमा हाम्रा लागि भनेर झन् विशेष परिकार तयार भइरहेका थिए । जता गयो खाने र खुवाउने कुरा मात्रै ।
कति–कतिखेर त साथीले ‘क्या गाना हे ?’ भनेर गीतको तारिफ गर्दा पनि गानालाई खाना सुनेर ‘बस भाई, नही खाना हे’ भनेका उदाहरणहरू छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा पन्जाबले हाम्रा लागि एककिसिमको खानाआतंक नै सिर्जना गरिदिएको थियो ।
झन् त्यसवेला हामी आश्चर्यचकित भयौँ, जतिखेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो– पाहुना आएका छन् भनेर हामीले विशेष केही पकाएका होइनौँ । धेरै परिकार बनाएर खाने हाम्रो संस्कार नै हो । नभन्दै सहर, बजार अनि गल्लीहरूमा भेटिने हरेक पन्जाबी खाएजस्तै अग्ला, हृष्टपुष्ट अनि फुर्तिला देखिन्थे ।
पन्जाबीहरूमा खाने संस्कृति विकास हुनुको मुख्य कारण उनीहरूको सबल कृषिकर्म नै हो । भारतमा १९६० को दशकमा हरित क्रान्ति अर्थात् ग्रिन रिभोलुसन सम्पन्न भयो, जसको नेतृत्व पन्जाबले नै गरेको थियो । प्रशस्त खेतीयोग्य जमिन र अधिकांश मानिस कृषि पेसामै संलग्न रहँदारहँदै पनि मनग्य उत्पादन भने हुन सकिरहेको थिएन । तर, पन्जाब सरकारले ६० को दशकमा एउटा निर्णयमार्फत कृषि क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढायो । मेक्सिकोबाट आफ्नो माटोसुहाउँदो १८ हजार टन गहुँका दाना मगाएर कृषकलाई वितरण गर्यो । बिजुली, पानी र फर्टिलाइजरहरू लगभग निःशुल्क रूपमा खेतबारीमा उपलब्ध गरायो । फलस्वरूप पन्जाब आफूलाई मात्र होइन, सारा भारतलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गर्न सक्षम बन्यो । आज पनि त्यहाँका खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर बेच्न वा बसोवास गर्न निकै नै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । खेतबारीमा सरकारले निःशुल्क बिजुली र सिँचाइको व्यवस्था गरेको छ । हरेक मुख्य सहरवरिपरि ठूला–ठूला नहर देख्न सकिन्छ । कृषि औजार खरिद गर्न कृषकले मनग्य अनुदान पाएका छन् ।
त्यसैले त पन्जाब सिंगो राष्ट्रकै अन्नभण्डार बनेर उभिएको छ । तसर्थ, भण्डारकै डाडुपुन्यु भएकाको भान्सामा अनेकथरि परिकार पाक्नु नौलो कुरो पनि त भएन ।
अझ मानिसले खान नछाडोस् भनेर प्रकृतिले जिब्रोमा अनेकथरी स्वाद भरिदिएको छ । निश्चित समयमा भोक लाग्ने, खाऊँ–खाऊँ लाग्ने, मीठो खाना देख्दा वा सम्झना मात्रैले पनि मुख रसाउने आदि प्राकृतिक गुणहरूले त झन् खाने कर्मलाई महत्वपूर्ण नै बनाइदिएका छन् ।
शाह जाले औरंगजेबलाई बन्दी बनाउँदै गर्दा उनकै रोजाइको एउटा मात्र अन्न खान दिनू भनी आदेश दिएका थिए रे । कुटिल औरंगजेबले चना मागे र आफ्नो निर्वासित जीवन चना मात्र खाएर बिताए । त्यो बाँच्नका लागि खाइएको खाना थियो ।
संसारमा आधाभन्दा बढी जनसंख्या (सायद) आज पनि बाँच्नका लागि मात्र खान्छ । गिठ्ठा–भ्याकुर बटुलेर गुजारा गर्ने या अरूले फालेको जुठो खाना खाएर जीविका चलाउने सयौँ उदाहरण त हाम्रै वरिपरि प्रशस्तै छन् । कोही रोगव्याधिका कारण खानबाट वञ्चित हुन्छन् । फेरि कोहीचाहिँ आफ्नो सिद्धान्त, धर्म, तपस्या या पेसाका कारण ठिक्क शरीरसुहाउँदो अड्कलेर खाने हुन्छन् । न्यूनतम बाँच्नका लागि पनि खान नपाउनेहरूका निम्ति खानु ज्यादै नै महत्वपूर्ण कर्म हो, त्यसमा कुनै दुईमत नै रहेन । तर, जो ‘बाँचिरहेका’ छन् उनीहरूका लागि खानु कत्तिको महत्वपूर्ण छ त ?
सन् २००९ मा प्रकाशित जर्मन जर्नललाई आधार मान्ने हो भने मानिस विनाखाना र पानी ८ देखि २१ दिनसम्म बाँच्न सक्छ र पानी मात्र पिएर २ महिनासम्म । तर, त्यति लामो समय भोकै बस्दा विभिन्न अंगमा पर्ने असर भने भयावह छ । तसर्थ, मानिसले बाँच्नका लागि खानुपर्ने न्यूनतम खाना भनेको वयष्क पुरुषका लागि १ हजार २ सय क्यालोरी प्रतिदिन र वयष्क महिलाका लागि १ हजार ८ सय क्यालोरी प्रतिदिन हो । मानिसलाई बाँच्नका लागि न्यूनतम कति खाना चाहिन्छ भनेर विभिन्न साइन्टिफिक रिसर्च भएका छन्, तिनैलाई आधार बनाएर सूत्रहरू पनि बनेका छन् । उदाहारणका लागि ५ फिट ४ इन्च उचाइ र ६० केजी तौल भएकी ३० वर्षीया महिलालाई प्रतिदिन न्यूनतम १ हजार ४ सय १५ क्यालोरी शक्ति बाँच्नका लागि चाहिन्छ ।
सर्सर्ती हिसाब गर्दा ठिक्कको एक थाल पाकेको भातमा ३ सय क्यालोरी, एक कचौरा दालमा ३ सय ५० क्यालोरी, एउटा रोटीबराबर सय क्यालोरी, बन्दाको तरकारी १ सय २२ क्यालोरी, प्रतिगोटा आलु सय क्यालोरी र एउटा अण्डाबराबर १ सय ७३ क्यालोरी शक्ति हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्दछ । अझ घिउ, मासु, दही, मोहीमा छुट्टै थप क्यालोरी पाइन्छ । यसरी हेर्दा हामीले खाने एक छाक सामान्य खाना मात्रै पनि बाँच्नका लागि पर्याप्त छ ।
तर, के हामी बाँच्नका लागि मात्र खान्छौँ त ?
प्रायः मानिसका लागि खानु, अझ मीठो खानु जीवनको महत्वपूर्ण कर्म हो । धेरैले तर्क गर्छन्– यो सब गरेको खानकै लागि त हो । हुन पनि हो, हाम्रो शरीरको बनावट नै त्यस्तै छ । यो मेसिनरूपी शरीर चलेकै हामीले खाने खानाबाटै हो । खाएको खानालाई घण्टौँ लगाएर पचायो, त्यसैबाट शक्ति सञ्चय गर्यो, रगतमार्फत त्यही खानाबाटै सञ्चित शक्तिलाई कोषिकाहरूसम्म पुर्यायो, अनि यो हड्डी र मांसपेशीहरूलाई जीवित तुल्यायो ।
एकचोटि यसरी सोचौँ न– यदि मानिसले खानेकर्मलाई आफ्नो सबैभन्दा न्यूनतम प्राथमिकतामा राखे के हुन्छ ? (यस आलेखमा दुई छाक खान धौ–धौ पर्ने समुदायको खानेकर्मबारे चर्चा गरिएको छैन ।) हामी मीठै खाऊँ भन्नका निम्ति असल वा खराब जस्तो कार्य पनि गर्छौं । खानैका लागि कतिपय ठाउँमा आफ्नो श्री, इतिश्री भुलिदिन्छौँ । दौडधूप, मारकाट, झैझगडा खानाकै लागि हुन्छन् । पापी पेटका अघि इमान र न्याय झुकेका सयौँ उदाहरण छन् ।
भनिन्छ, मानिसको सृष्टि गर्दा उसलाई भगवान्ले एउटा अर्ती दिनुभएको थियो रे, एकपटक खानू, अनि तीनपटक नुहाउनू । तर, मानिसले भने त्यसलाई ठिक उल्टो बुझ्यो, एकपटक नुहाउनू, अनि तीनपटक खानू । फलस्वरूप मानिसले आज खाना खानुलाई नै जीवन ज्युनुको पर्याय बनाएको छ ।
हो, खानुपर्छ, मीठो–मसिनो नै खानुपर्छ । पेट चर्कने गरी नै खानुपर्छ । बाँच्नका लागि मात्र होइन, स्वस्थ रहन अनि चुस्त–दुरुस्त रहन पनि खानैपर्छ । तर, हरेक दिन हरेक गाँस हाल्नुअघि एउटै प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ–
के यो खाना मेरो इमान र परिश्रमको खाना हो ?
आखिर पन्जाबले हामीलाई सिकाएको कुरो पनि त्यही थियो– बडो इमानदारीका साथ कृषिकर्म गर्ने अनि आफ्नो परिश्रमको कमाइ उस्तै रइस पाराले खाने ।
तस्बिर : वीर अनमोल सिंह सन्धु, पटियाला ।
Tags: घुमफिर, विशद दाहाल